“हाम्रो नाच्ने गाउने बेला” | Human Rights Watch
“हाम्रो नाच्ने गाउने बेला”
शर्मि र्मिला जी. १४ वर्षकी भइन्। उनले १२ वर्षमै १८ वर्षको केटासित भागी विवाह गरेकी थिइन्। यो तस्वीर लिँिँदा उनी ७ महि नाकी गर्भवत ी थिइन्। उनको केटा साथीसित मायापरित ी बसेको हल्ला चलेपछि उनका बाबुआमाले उनीहरूलाई छुट्याउन खोजे र उनीहरूले भागी विवाह गरे। चाँडै विवाह गरेको र पढाइ छाडेकोमा शर्मि र्मिला अहि ले पछुताउँछि न्। उनले बताए अनुसार उनलाई गर्भ धारण र प्रजनन स्वास्थ्य वा परिव ार नियोजनका बारेमा केही थाहा थिएन। अहि ले उनलाई गर्भवत ी नभएको भए हुनेथ ियो भन् ने लाग्छ। अप्रि ल २५, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
पाटनको एउटा सार्वजनिक पार्कर्कमा खेल्दै एउटी बालिका। नेपालमा ३७ प्रतिशत केटीहरूको विवाह १८ नपुग्दै हुन्छ र १० प्रतिशतको १५ वर्षभित्रै। नेपालको कानून अनुसार विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष हो। अप्रि ल २४, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
तिलमाया एम. १८ वर्ष। उनले १५ वर्षकी छँदा चितव न बस्ने २० वर्षको केटासित भागी विवाह गरिन्। उनले सुनाए अनुसार, ११ वर्षकी छँदा उनलाई उनका बाबुले स्कूलबाट निकालेर पोखरामा कसैका घरमा काम गर्न राखिदि एका थिए। अप्रि ल ११, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
पाँच वर्षकी एउटी बालिका आफ्नो नर्स री कक्षामा। उनी कुनै दाताको व्यक्तिगत छात्रव ृत्तिमा यहाँ पढिरहेकी छन्। राम्रो शि क्षाले बालविवाह रोक्नमा मदत गर्छर्छ। विद्यालयमा पढिरहेका कि शोरीहरूको विवाह भएको कमै मात्र पाइन्छ। अप्रि ल १२, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
ललित ा बी., अहि ले १७ वर्षकी भइन्। उनी १२ वर्षकी छँदा ३७ वर्षको मान्छेन्छेसित उनको मागी विवाह भएको थियो। उनी विवाहपछि चाँडै नै गर्भवत ी भइन्। उनका दुईवटा बच्चा जन्मिने बित् तिकै मरे र अहि ले उनका काखमा ते स्रो बच्चा छ। ललित ाका श्रीमानले उनलाई २०१५ मै छाडे र अर्को विवाह गरे। © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
अहि ले १७ वर्ष पुगेकी अञ्जना एम. दुई वर्षकी आफ्नी छोरी इशित ासित आफ्नो घर बाहि र। उनको श्रीमानसित मायापि रती बसेको हल्ला चलेपछि काकाकाकीका करले १४ वर्षमै उनको विवाह भयो। सात वर्षकी हुँहुँदा उनलाई उनका बाबुले कसैका घरमा काम गर्न पोखरामा पठाएका थिए। अप्रि ल ११, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
पवित्रा एम., १६, ले १५ वर्षको उमेरमा आफ्ना घरको अति गरीब अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि भागी विवाह गरिन्। अहि ले उनी सासुससुरासित बस्छिन् र ठूलो परिव ारका लागि भातभ ान्साको काम गर् छिन्। उनका श्रीमान भारतमा भान्सेको काम गर् छिन्। अप्रि ल २५, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
गङ्गा एम. कैलालीस्थित आफ्नो घरमा। उनको विवाह १६ वर्षको उमेरमा भएको थियो। यो फोटो खिच्दा उनी पाँच महि नाकी गर्भवत ी थिइन्। उनका श्रीमान भारतमा भान्सेको काम गर्छर्छन्। अप्रि ल २५, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
ललित ा बी., १७, उनकी आमा राजमती बी. र छोरी कैलालीस्थित आफ्नो घरको आँगनमा। ललित ा १२ वर्षकी छँदा ३७ वर्षको मान्छेन्छेसित उनको मागी विवाह भएको थियो। उनी विवाहपछि चाँडै नै गर्भवत ी भइन्। उनका दुईवटा बच्चा जन्मिने बित् तिकै मरे र अहि ले उनका काखमा ते स्रो बच्चा छ। ललित ाका श्रीमानले उनलाई २०१५ मै छाडे र अर्को विवाह गरे। अप्रि ल २५, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
सरित ा एम., १७ आफ्नी भर्ख र जन्मे की छोरीसित चितव नस्थित आफ्नो घरमा। सरित ाले १५ वर्षकै उमेरमा १८ वर्षको केटासित भागी विवाह गरेकी हुन्। उनका श्रीमान् भारतमा श्रमि कका रूपमा काम गर्छर्छन्। अप्रि ल १२, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
नौ वर्षकी सलिना टी. आफ्नी साथी ११ वर्षकी बि पना एल. लाई भाँडा माझ्ने काम सघाउँदै। उनीहरू दुवै जना ललित पुरमा बस्छ न्। उनीहरू दुवै जना इँटा भट्टामा काम गर्ने आफ्ना बाबुआमालाई काम सघाउँछन्। बि पना विद्यालयमा भर्ना भएकी थिइन् तर एक दि न मात्र पढ्न गइन्, सलिना भने विद्यालय गइरहेकी छन्। त्यसैले उनी विद्यालय विदा भएका बेला काम गर् छिन्। नेपालमा बालश्रम सामान्य छ र ४० प्रतिशत जति बालबालिका काम गर्छर्छन्। काम गर्ने बालबालिका मध्ये दुई तिहाई १४ वर्षभ न्दा कम उमेरका छन् र आधाजति आफ्नो पढाइ-लेखाइलाई नै प्रभाव पार्ने खालका जोखिमपूर्ण काममा छन्। केटाहरूका तुलनमा केटीहरू बढी काम गर्छर्छन् (४८ प्रतिशत केटी र ३६ प्रतिशत केटा) र जोखिमपूर्ण काममा संलग्न मध्ये ६० प्रतिशत केटी छन्। अप्रि ल २७, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
पवित्रा एम्.,१६, र कल्पना टी., १९ दुवै ले आफ्ना बाबुआमाको अति गरीब अवस्थाबाट मुक्ति पाउनका लागि १५ वर्षको उमेरमा भागी विवाह गरेका हुन्। उनीहरू दुवै का श्रीमानहरू भारतमै बसेर काम गर्छर्छन्। अप्रि ल २५, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
शर्मि र्मिला जी., १४, र शारदा डी., १५ कैलालीमा। शारदा स्कूल जाँदैछिैछि न् र आफ्नो गाउँका अरू केटीहरू जसरी विवाह गर्न चाहन्नन्। शर्मि र्मिलाले १२ वर्षमै भागी विवाह गरेकी हुन् र यो फोटो खिच्दा उनी सात महि नाकी गर्भवत ी थिइन्। उनलाई सानैमा विवाह गरेकोमा पछुतो छ उनलाई आफू बच्चा पाउन तयार भएजस्तो लाग्दैन। अप्रि ल २५, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि
मञ्जुञ्जु एम., १६, तिलमाया एम., १८ र सङ्गीत ा एम., १९ आ-आफ्ना बच्चाहरूसित चितव नमा एउटा डाक्टरको अफि स अगाडि । मञ्जुञ्जु १५ वर्षकी छँदा उनका आमाबाबुले उनको विवाह १९ वर्षको केटासित गरिदि एका थिए। तिलमायाले १५ वर्षमै २० वर्षको केटासित भागी विवाह गरेकी थिइन्। सङ्गीत ा १७ वर्षकी छँदा २० वर्षको केटासित उनको मागी विवाह भएको थियो। अप्रि ल १२, २०१६ © २०१६ स्मीत ा शर्मा ह्युमन राइट्स वाचका लागि